Egypta: Miketrika valifaty ny Minisitry ny atitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2010 19:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, বাংলা, Español, Aymara, English
Amin'ny fampiasana ny blaogin'izy ireo, ny finday, ary ireo media vaovao, dia nitatitra tranga fampijaliana maro nataon'ireo mpitandro filaminana tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa ireo mafana fo Ejiptiana. Ry Wael Abbas (Misr Digital), Shahinaz Abdel Salam (Wa7da Masreya), Ramy Raoof (Human Rights Defender), Amr Gharbeia (Gharbeia), Noha Atef (Torture in Egypt), Mohamed Khaled (Mac), Sameh El Aroosy (Eye on the World), Malek Mostafa (Malek X), Hossam El Hamalawy (3arabawy), sy ny maro hafa no misolo vava zon'olombelona sy mamboraka ireo fandikan-dalàna sy kolikoly ataon'ny mpitandro filaminana tsy mba nisy nitatitra.
Ny tranga teny nalaza indrindra dia ny an'i Emad El Kebir, izay nampijaliana sy novetavetain'i Islam Nabih sy Reda Fathi – mpitandro filaminana roa niatrika fitsaràna taorian'ny niparitahan'ny horonantsarin'ilay fampijaliana. Ary ny vao haingana indrindra dia ny fampijaliana mahery vaika sy famonoana mahatsiravina an'i Khaled Said – Ejiptiana 28 taona avy any amin'ny tanàna amorontsirak'i Alexandria izay maty noho ny fangatahana ny taratasy fiantsoana azy.
Ny lahatsoratra farany indrindra navoakan'i Amr Gharbeia dia mitondra ny lohateny hoe:
Mijoro manoloana ny fampijaliana.
Izy ity dia mikasika ny tetikadin'ny olona sivily mba hanoherana ny fampijaliana. Manoratra i Gharbeia:
Ny tranga fampijaliana niseho farany indrindra, izay nanala ny ain'i Khaled Said dia nanamafy ny hafanam-po enti-manohitra ny fampijaliana, ka mametraka izany ho anisan'ireo antony mampihemotra ny olona amin'ny fitakiana ny zon'izy ireo hanana fiainana tsaratsara kokoa. Osa loatra ireo olona eo ambany fanaraha-maso ka tsy afaka hiaro ny tenany; sady andraikitry ny fiaraha-monin'izy ireo ny mitandro ny fandriampahalemany sy ny filaminany.
Androany, dia nisy tranonkala iray vaovao miady amin'ny fampijaliana nisokatra. Maro ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy ireo olon-tokana mpiaro avy amina foto-kevitra samihafa no ao ambadik'ity tranonkala ity, izay iarahan-dry zareo miasa amin'ny fanoroana ireo niharan'ny fampijaliana toro-hevitra ara-psikolojika sy araka ny lalàna, amin'ny fitantaràna tranga hafa, amin'ny fifandraisana amin'ireo vondrona media mahazatra, ary amin'ny fanairana ny olona ho tonga saina amin'ny antony sy ny vokatr'izany. Ity tranonkala ity dia tohanan'ny The International Rehabilitation Council for Torture Victims [Filan-kevitra Iraisam-pirenena ho an'ny Famerenana ireo niharan'ny Fampijaliana ho aoa anaty fiarahamonina] any Copenhagen.
Ny vokatra voalohany vitan ‘ity sehatra iraha-miasa ity dia “Ramy: Tantaran'ny tanànan'i Tamy El Amadeed” – sarimihetsika mikasika tovolahy iray avy amin'ny tanàna iray any Egypta izay nampijalian'ny mpitandro filaminana tamin'ny 2008 mba hiaiky famonoana izay tsy nataony velivaly.
Raha ny voalazan'i Wael Abbas,toa miketrika valifaty avy amin'ireo namoaka ireo trangana kolikoly ataon'ny mpitandro filaminana sy ny fampijaliana mifanesy ny Ministeran'ny Atitany Ejiptiana . Wael dia nahazo hafatra avy amin'i Sameh El Aroosy izay nizara horonantsary maro mikasika ireo fampijaliana any amin'ireo tobin'ny mpitandro ny filaminana ilazany fa voasambotra tany Libya izy.
Toy izao izany hafatra izany:
Wael Abbas malala,
Tiako ho fantatrao fa notanan'ny manam-pahefana Libyana mandritra ny 43 andro aho ary napetraka tamina tranomaizina mitokana. Ny fisamborana sy ny fitazonana ahy dia iraka avy amin'ny jeneraly Hisham El Naggar – mpiasan'ny fifandraisana any amin'ny konsily Egyptiana. Ny solosaina roa fitondrako mandehandeha sy ny pasopaoroko Ejiptiana dia nogiazana ary navotsotra aho taorian'ny fanerena ahy hanao sonia ny famoahana ahy milaza fa tsy mahazo manakiana ny fitondrana Ejiptiana ao amin'ny blaogiko na any amin'ny toerana hafa ao anaty aterineto. Androany, ary saiky herintaona latsaka izao, dia mbola tsy azoko ihany ny pasopaoroko sy ireo solosainako, ary mbola sesitany any amin'ny tanànan'i Qaminis aho, 50 kilometra miala an'i Bin Ghazi.
Wael manamarika amin'io hafany io ary miteny:
Nanapa-kevitra ny hanenjika ireo izay namoaka ireto fampijaliana manafintohina nataony ireto ny Minisiteran'ny atitany. Raha ny hita mazava dia mandingana ny sisintany Ejiptiana ny tànany mitady valifaty. Hiangaviana ianao hanampy ireo “mpanohitra ny fampijaliana”.